Ny tanky BSL GFS dia azo ampiasaina koa ho tankina avy amin'ny rano, tafangona ao amin'ny faritry ny orinasa, faritra hipetrahana ary trano avo. Mora ny namory ary manana fiainana fanompoana maharitra. Torolalana fametrahana ho an'ny rano mandeha amin'ny afo: 1. Tokony ho fisaka ny tany, tokony ho zakan'ny tany ny lanjan'ny vatan'ny tondra-drano aorian'ny famenoana rano, ary tokony tsy ho zavatra maranitra ny tany. 2, 5 taonina sy ambany (anisan'izany ny vokatra 5 taonina) dia tsy mila fifantoka be loatra, ny vokatra ca ...
Fisotro rano fisotro
Ny fampiharana ny rano fitahirizan-drano dia ampiharina amin'ny fitahirizan-drano sy fitahirizana rano aorian'ny fanaleanana. Fohy ny fotoana fametrahana ary azo atao amboarina ny kalitao sy ny lokon'ny rano fitahirizana, izay mety amin'ny fepetra takian'ny saha. Mba hahazoana antoka ny fiarovana ny rano fisotro dia tokony hifidy fisotro rano tsy misy poizina, tsy manimba, tsy misy atahorana ary azo itokisana. .